Maxaad ka taqaan Racep Tayyip Erdogan? – Radio Muqdisho
Maxaad ka taqaan Racep Tayyip Erdogan?
in Maqaallo, Wararka
BY: Liibaan Cabdi Cali
Magaciisa oo buuxa waa Raccep Tayyip Erdogan. Waxa uu ku dhashay magaalada Istanbul 26-kii February 1954. Waa madaxweynihii 12-aad ee Turkey. Muddadii u dhexeysay 1994 iyo 1998 waxa uu ahaa duqa magaalada Istanbul. 2003 ilaa 2014 waxa uu ahaa ra’iisulwasaarihii 36aad ee Turkiga.
Sanadkii 2001 Erdogan waxa uu aasaasay Xisbiga Caddaaladda iyo Horumarinta AKP, kaas oo saddex jeer oo is xiga ku guuleystay doorashooyinkii guud ee dalkaas ka dhacay sanadihii 2002,2007 iyo 2011.
Erdogan waxa uu ka soo jeedaa qoys sabool ah, yaraantiisiina waxa uu magaalada Istanbul ku iibin jiray qare, si uu aabbihiis ugu kaalmeeyo quudinta qoyska oo aad sabool u ahaa.
Waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda Marmara oo uu ka bartay cilmiga dhaqaalaha.
Erdogan waxa uu soo noqday Ciyaartoy caan ah, isagoo u ciyaari jiray kooxda Kasimpasa muddadii u dhexeysay 1969 ilaa 1982, ka hor intii aan loo dooran duqa Istanbul.
2003-dii markii uu noqday Ra’iisulwasaaraha Turkiga, Erdogan waxa uu ka shaqeeyay in Turkigu gaaro degganaano Siyaasadeed,Dhaqaale iyo Ammaan. Waxa uu la heshiiyay Armenia ka dib cadowtooyo sanado badan soo jirtay, waxa xiriir la furay Giriigga,Azarbejan iyo jamhuuriyaadkii hore ee Soviet-ka.
Waxa uu soo celiyay xiriirkii kala dhexeeyay inta badan dalalka Carabta, isagoo fasaxay in ay Viso la’aan imaan karaan Turkiga. Sidaas oo kale ayuu u xoojiyay xiriirka Turkiga iyo dalalka reer galbeedka.
2009-kii Istanbul waxaa loo aqoonsaday caasimadda dhaqanka ee Europe. Waxa uu sidoo kale dadaal ku bixiyay in Turkigu ka mid noqdo Midowga Yurub, arrintaas oo horumar laga gaaray.
Erdogan iyo Gaza
Racep Tayyip Erdogan waxa uu mowqif adag iska taagay duullaannadii ay Israel dhowr jeer ku qaadday GAZA iyo sida ay ugu tumatay shacabka masaakiinta ah reer Falastiin.
29-kii January 2009, Erdogan waxa uu isaga baxay Shirkii DAVOS isagoo ka carooday hadallo daan-daansi ah oo uu jeediyay madaxweynaha Israel Shemon Berez oo u qiil dayay xasuuqii Israel ka geysatay Gaza.
Erdogan waxa uu Berez ugu jawaabay “Waad iga da’ weyntahay, laakiin xaq uma lihid in aad lahjaddaas ku hadashid adigoo codkaaga hor u qaadaya, taas oo muujineysa in aad dambiile tahay, Askartiinnu waxay xeebta Gaza ku xasuuqayaan carruur aan dambi lahayn idinkuna waad ku faraxsantihiin”.
Sanadkii 2010 dowladda Sacuudigu waxa ay Erdogan siisay abaal marinta caalamiga ah ee Boqor Feysal ee u adeegista islaamka.
2012-kii Turkigu waxa uu ku dhawaaqay in uu bixiyay dhammaan deymihii uu ku lahaa Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF). Erdogan waxa uu xilligaas yiri Turkey lacag dambe kama deynsan doonto IMF, balse IMF ayay deyn siin doontaa”.
Muddadii Erdogan talada hayay Turkey waxa uu noqday dalka 16aad ee ugu dhaqaalaha xooggan dunida, dhanka milaterigana waa dalka 7aad ee ugu xooggan caalamka.
2011-kii markaas oo ay Soomaaliya ku dhufatay macluushii ugu xumayd gobolka muddo 60 sano ah, Erdogan waxa uu go’aansaday in uu booqasho ku yimaad Soomaaliya , isagoo indhaha caalamka u ku soo jeediyay Soomaaliya oo sanado badan la iska illaaway.
Erdogan waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu fulin Soomaaliya ka fulin doonto mashaariic horumarineed, taas oo uu ka dhabeeyay.
Turkigu waxay muddo 3 sano gudohood ku dhiseen jidad,isbitaallo,Iskuullo,garoonka iyo dekadda Muqdisho . waxaa intaas dheer howlaha dhanka bani’aadminimada oo aan marnaba joogsan.
Maamulka Koonfur galbeed oo guddi u saaray Aaska Allaha u naxriistee Xildhibaan Xaabsade
Daawo Sawirada imaanshaha Madaxweynaha Turkiga Rece Tayyip Erdogan iyo sida loo soo dhoweeyay